Amin’ny fiandohan’ny febroary : mety hiakatra indray ny vidin-tsolika | NewsMada
Amin’ny fiandohan’ny febroary : mety hiakatra indray ny vidin-tsolika
Hitohy? Toy ny tamin’ny volana desambra sy janoary teo, nilaza ny mpandraharaha iray fa mety mbola hiakatra indray ny vidin-tsolika eto amintsika. Marihina fa tsy mampiomana mialoha mihitsy ny fanjakana amin’ny fiovaovan’ny vidin-tsolika, saingy azo atao kosa ny maminavina dieny mialoha.
Roa volana mialoha ny famandrihana sy fividianana ny solika any ivelany, ary ampiharina roa volana aty aoriana ny vidiny tamin’izany. Nambaran’ity mpandraharaha ity fa singa roa, farafahakeliny, ny hamaritana ny vidiny amin’ny mpanjifa, ny vidin’ny barila sy ny sandan’ny vola Ariary miohatra amin’ny dolara, ividianana azy eo amin’ny tsena. Raha ny zava-nisy, niakatra ho 54-55 dolara ny vidin’ny iray barila teo amin’ny tsena, ny volana desambra 2016, ary nitotongana ny Ariary niohatra tamin’ny dolara (1 dolara=manodidina ny 3.200 Ar). Koa tombanana hitombo tsy latsaky ny 100 Ar na 110 Ar isaky ny litatra indray ny vidin-tsolika amin’io volana febroary io.
Tena mihatra ny vidin-tsolika
Amin’ity mpandraharaha ity, mihatra eto amintsika ny tena vidin-tsolika ho an’ny mpanjifa na tsy mitovy aza ny mpamatsy ividianan’ny mpandraharaha samihafa azy any ivelany. Mitovy daholo koa ny kalitao sy ny karazany satria atoby ao amin’ny toerana iray ihany izy rehetra rehefa tonga eto Madagasikara. Maha samy hafa azy fotsiny, ny fanampohana akora manokana (samy manana ny azy) manatsara kokoa ny kalitao mialoha ny hitsinjaran’ny kamiao isaky ny toby fivarotana.
Hiantraika amin’ny saran-dalana
Raha hiakatra tokoa ny vidin-tsolika amin’ny fiandohan’ny volana febroary izao, vao mainka ho sarotra ny hitantanan’ny fanjakana ny fidangan’ny vidin-javatra sy ny vidim-piainana. Efa hampiakatra ho 500 Ar ny saran-dalana ny taxi-be, nidangana ny vidim-bary ary ahina fa misy sahady ireo manafim-bary.
Maminavina ho 7% ny fidangan’ny vidim-piainana raha ny voasoratra anaty Tetibola 2017. Hihoatra lavitra noho io anefa ny mety hitranga raha tarafina amin’izao fisondrotan’ny vidin-javatra miantoka ny fiainan’ny mponina izao. Dikany, hitombo ny fahantrana, ady tsy mety resin’ny fitondrana.